China Anyanwụ Kwadoro Na Adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Anyanwụ Kwadoro Na Adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Anyanwụ Kwadoro Na Adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ)
25W ada anyanwụ post top ìhè
25W ada anyanwụ post top ìhè Na mgbede, 25W Solar LED Post Top Light ga-agbanye onwe ya wee nwuo ọkụ na-acha ọcha site na iko mmiri ozuzo na nchapụta 140 lumens na ụgwọ zuru oke nke anyanwụ. Nke a dugara Solar Post ebe ìhè ga-atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe anyanwụ na-abịa elu. Ọ bụrụ...
20W post top butere ìhè anyanwụ 5000K
20W post top butere ìhè anyanwụ 5000K 1. 20W butere post top lamp Energy ịchekwa, enyi na gburugburu, Ọ nweghị UV ma ọ bụ radieshon IR. 2.Anti-ujo, mgbochi mmiri, enweghi enwu, enwu enwu, na-echebe anya gi. 3. duru post n'elu ndozi 20W Nnukwu ike na nkwụsi ike, enweghị mmezi mmezi. 4. 20W Anyanwụ post n'elu...
Anyanwụ Kwadoro Na Adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ Anyanwụ Kwadoro Na-adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ na-adọba ụgbọala na bọmbụ ọkụ Ike anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ kacha mma na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ Ndị na-adọba ụgbọala na bọmbụ ọkụ